रोनाल्डो बेच्न रियल तयार ! | Hamro Khelkud
रोनाल्डो बेच्न रियल तयार !
म्याड्रिड (एजेन्सी)– रियय म्याड्रिड क्लबका सुपर स्टार क्रिस्टिायनो रोनाल्डोलाई बेच्न तयार भएको सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएको छन् । रियलका अध्यक्ष फ्लोरिन्टिनो पेरेजले चाहेको खण्डमा रोनाल्डोले क्लब छाड्न सक्ने संकेत गरेपछि स्पेनिस महारथी आफ्ना सुपर स्टारलाई विक्री गर्न तयार देखिएको हो ।
पूर्व सहमति अनुसारको नयाँ प्रस्ताव नआएपछि रोनाल्डो क्लबसँग असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ । गत वर्ष टोलीलाई युरोपियन च्याम्पियन बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका रोनाल्डोले त्यसपछि उनको पारश्रमिकमा बृद्धि गरिने सहमति भएको सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
अध्यक्ष पेरेजले रोनाल्डोका एजेन्ट जर्ज मेन्डिसलाई अन्य क्लबको प्रस्ताव सुन्न भनेको स्पोर्टस मेलको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । पेरेजले नै गत सिजन च्याम्पियन्स लिगपछि रोनाल्डोलाई नयाँ सम्झौता गर्ने बताएका थिए । तर, त्यो सहमति अनुसारको प्रक्रिया अघि नबढेपछि रोनाल्डोले क्लब छाड्न चाहेको बताइएको छ ।
रोनाल्डोको चाहना भने पुरानै क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड फर्कने रहेको बताइएको छ । रियललाई चौथो पटक च्याम्पियन्स लिग विजेता बनाएयता नै रोनाल्डो क्लबसँग असन्तुष्ट रहँदै आएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । कर छलीको मुद्दामा पनि क्लबले सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ ।
स्पेनिस पत्रिका डेरिया एएसले पहिलो पटक रोनाल्डोले रियल छोड्न चाहेको समाचार पहिलो पृष्टमा छापेको थियो । पक्रिकाले रोनाल्डो युनाइटेड जान चाहेको उल्लेख गरेको थियो । शनिबार भिल्लायरियलसँग १–० ले पराजित रियल ला लिगाको शीर्षस्थानको बार्सिलोनाभन्दा १९ अंकले पछाडी छ ।